यी परिस्थितिहरूमा श्रीमती सहित भाइ बहिनीलाई गर्नुपर्छ त्याग
आचार्य चाणक्यको अनमोल विचार आज पनि उति नै प्रासङ्गिक छ । मनुष्यले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ ? उसको समाज र आफ्नो परिवार प्रति कर्तव्य के हो? उसको आचरण कस्तो हुनपर्छ? यसको पूरा उल्लेख हामीले चाणक्य नीतिमा पाउन सक्छौ । उनले बताएका मार्गमा चले व्यक्तिले ठुला कठिनाइहरूलाई पनि आरामसँग पार गर्न सक्छ । उनले श्रीमती, भाइ-बहिनी, गुरु र धर्मलाई व्यक्तिको जीवनमा महत्त्वपूर्ण बताएका छन् । आचार्य चाणक्यले कुन परिस्थितिहरूमा यिनको त्याग गर्नु पर्छ त्यो पनि बताएका छन् ।
श्रीमान्-श्रीमती सम्बन्ध जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जीवनमा आउने गम्भीर चुनौतीहरू पनि दुवैले एक अर्काको सहयोगमा पार गर्छन्। यदि घरकी श्रीमती सधैँ क्रोधमा हुन्छिन् र आफ्नो श्रीमान्‌को हरेक काममा बाधा उत्पन्न गर्दछिन्। आचार्य चाणक्यका अनुसार यस्तो श्रीमतीलाई सही समयमा त्याग्नुपर्छ, अन्यथा जीवन नरक बन्छ।
आचार्य चाणक्यका अनुसार जुन धर्मले हिंसाको कुरा गर्दछ र त्यसमा दयाको कुनै स्थान छैन। त्यो धर्म त्याग्नु राम्रो हुन्छ। यस्तो धर्मले मानिसको भित्रको मानवतालाई नष्ट गर्दछ। दया र अहिंसा बिना जीवनमा कुनै मूल्य बाँकी रहँदैन।
हाम्रो समाजमा गुरुको विशेष स्थान छ। आमा बुबा र गुरु भन्दा जीवनमा धेरै मूल्यवान् अरू केही छैन। यस्तो स्थिति मा, गुरुको सन्दर्भमा चाणक्य भन्छन् जुन गुरुले आफ्नो शिष्यलाई उचित शिक्षा दिँदैनन् यस्ता गुरुहरूलाई त्याग्नुपर्छ।
जीवनमा भाइ र बहिनीको धेरै अमूल्य सम्बन्ध हुन्छ। खुसी र दुः ख मा दुवै एक अर्काको सहारा बन्छन्। यस्तो स्थितिमा, आचार्य चाणक्य भन्छन् कि यदि तपाईँका भाइबहिनीहरूलाई तपाईँ प्रति कुनै प्रकारको स्नेह वा माया छैन र प्रतिकूल परिस्थितिमा सँगै उभिँदैनन् भने यस्ता भाइबहिनीहरूलाई समय रहँदै त्याग्नु उचित हुन्छ।